नागरिकका गुनासो सुन्न सरकारी मोबाइल एपको अवधारणा ल्याउँदै सरकार — Arthatantra.com
Arthatantra.com > फिचर > नागरिकका गुनासो सुन्न सरकारी मोबाइल एपको अवधारणा ल्याउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारी सेवा सम्बन्धी गुनासाहरुलाई अब सरकारले मोबाइल एपबाटै सुन्ने अवधारणा तयार गरेको छ । यसका लागि ‘नागरिक अधिकार’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
बाबुरम भट्टराई ‘हेलो सरकार’मा समाजिक सञ्जाल र टेलिफोनमार्फत मात्रै गुनासो गर्न सकिन्छ । तर, अब सरकारका सेवा, सुविधा, नागरिकका समस्या सिधा सम्बन्धित निकायमा पुग्ने गरी यस्तो एप बनाउन लागिएको हो । एकीकृत रुपमा सरकारका सबै निकायसम्बद्ध गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्नका लागि मोबइल एप सञ्चालन गर्ने योजना बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
यस्तो एपमा सबै मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको गुनासो सोझै एपमार्फत कार्यलय प्रमुखसम्म पुर्‍याउन सकिने अवधारणा तयार गरिएको छ । यो एप बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था हुनेछ । यसमार्फत आउने गुनासो प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक मन्त्रालयमा गुनासो सम्बोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र पनि राख्ने तयारी छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही संयन्त्रलाई यसमा प्रयोग गर्न सकिने अधिकारीहृरु बताउँछन् । ‘अहिले हेल्लो सरकारले गरिरहेको कामलाई थप व्यवस्थित र छरितो बनाउन यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने,’गुनासो सुनेपछि तत्कालै त्यसको सम्बोधन गराउन यो प्रभावकारी हुनेछ ।’
सरकारी कार्यालयहरुमा देखिएको बेथिति, विकास निर्माणका काममा भएका ढिलासुस्ती र लापरवाही तथा सुशासनका सवालमा देखिने कमजोरीलाई हल गर्न एप सहयोगी हुने विश्वास सरकारको छ । ‘अहिले धेरै नेपालीको हातमा स्मार्ट फोन पुगिसक्यो । मेरो सरकारले मैले गरेको गुनासो तत्कालै सुन्छ भन्ने अनुभति गराउन यो प्रभावकारी हुन्छ,’ ती अधिकारीले भन्छन् । अनलाईनखबर
२०७५ जेष्ठ १० गते १३:३३ मा प्रकाशित
आजै खरिद गर्नुहोस् राधी विद्युतको आईपीओ
पर्यटन मजदुरको सबैभन्दा ठूलो संस्था यूनिट्राभको अध्यक्षमा पराजुली
सेयरमा निष्काशनमा के फरक पर्ला ? ११ बैंकले पाए आस्वा प्रणालीमा सहभागी हुने अनुमति
टुरिस्ट भिसामा खाडी जान रोक !
कृषि विकास बैंकको शेयर प्रमाणपत्र वितरण साउन १४ बाट